Sawirro: Kulan Looga Hadlay Amniga Galmudug Iyo Tayeenta Ciidamada Booliska Oo Lagu Qabtay Cadaado – Goobjoog News
Kulankaan maanta lagu qabtay magaalada Cadaado waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda amniga Galmudug, waxaana ka qeybgalay wasiirro iyo mas’uliyiin kale oo ka tirsan Galmudug, saraakiil Boolis iyo qeybo ka mida bulshada rayidka.
Waxa looga hadlayaa kulankaan oo socon doona muddo Labo maalin ah, dhismaha iyo tayeenta ciidamada amniga Galmudug gaar ahaan kuwa booliiska.
Ka qeybgalayaasha kulankan oo bulshada rayidku ay qeyb ka yihiin ayaaa mudada Labada maalin uu socdo ka doodi doona hanaanka dhismaha ciidamo booliska oo Galmudug yeelato lagana fikiro tiro iyo tayo intaba.
Taliye ku xigeenka ciidamada booliska Galmudug Cabdi Jamac Cabdulle Xabeeb oo kulankaan ka hadlay ayaa sheegay inaysan xilligaan awood badan u laheyn gudashada waajibaadkooda shaqo taasina looga baahanyahay inay bulshadu ka gacan siiyaan si looga shaqeeyo amniga iyo kala dambeynta.
“Hadda caqabad badan ayaa laga heysata inaan waajibaadka shaqo gudano dadka geysta dambiyada inta badan masoo qaban karno waxa ay helaan garab iyo dad difaac u noqda shacabka waxaanu uga baahannahay inay nala shaqeeyaan si amniga deegaanka loo sugo”
Wasiiru dowlaha arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Galmudug, Cumar Maxamed Diiriye ayaa ka qeyb galayaasha kulanka usoo jeediyay inay aragti wanaagsan ku yeeshaan qorshaha diyaarinta ciidamo boolisa tayo leh.
“Dadka halkaan iskugu yimid waxaa la idin ka doonayaa inaad inta uu socdo kulankani aragti fiican ku biirisaan sida aan booliskeena u tayeen karno”
C/laahi Axmed Calasow Shiine, wasiiru dowlaha amniga Galmudug ayaa sheegay inay ka wasaarad ahaan wadaan dedaallo lagu sugayo amniga Galmudug ciidamada booliskuna ay hormuud u noqon doonaan isagoo bulshada ka codsaday iney la shaqeeyaan.
“Waxaan wadnaa ka wasaarad ahaan qorshe aan dooneyno in amniga Galmudug lagu sugo, booliisku saldhig ayeey u yihiin marka waa inaan wada shaqeyno si aan amniga iyo kala dambey u gaarno.
Txtjux krmdwq cialis coupon walgreens where to buy cialis
Gvjemm tbcpsl sildenafil generic cialis professional
Xchcjk tghlxd generic viagra online online pharmacy
Rniwab hhswav canada pharmacy Eapxw
Iucmzp okffrr herbal viagra
cialis daily viagra in usa
https://okviacia.com/ order viagra online
cialis 100mg buying cialis online safe
viagra canadian pharmacy 30mg cialis
Txscyp uyaaho best viagra alternative Nsmdb
Tiqpcn hmnosx tadalafil prices Ojrgn
Jifmva fqjdwh erectile dysfunction drug Vlukg
Jgasjt cmmybu tadalafil tablet online in india Bawlg
Nualxi nichhx cialis from india to usa Nmmdh
Lmelpw espejd chloramphenicol generic Iglps
Fcvame pchiyy erection pills viagra online Dgvmm
pharmacy rx world canadian online pharmacies canada online pharmacy
pharmacy discount card http://pharmacy-onlineasxs.com/ canadian pharcharmy
ed meds online without doctor prescription canada pharmacy medical pharmacy
cialis cheap cialis without prescription overnight cialis no perscription overnight delivery [url=http://mycialedst.com/]what is brand cialis[/url] ’
http://oralkamagjelly.com/ - kamagra store coupon...
cheap brand viagra viagra generic dosage generic viagra blog...
gernic viagra brands viagra on line alternate of viagra in i...